२५ वर्षदेखि बौद्धमा लुकाइएको त्यो साढे २ केजी यु,रेनियमको कथा यसरी सुरु हुन्छ….यहाँबाट ल्याएर लुकईएको थियो(भिडियो सहित) – NepalajaMedia
March 14, 2021 925
नेपालमा पहिलोपटक यु,रेनियम बरामद गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धबाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयको टोलीले बिहीबार साढे २ किलो यु,रेनियम ब,रामद गरेको हो । महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एआईजी हरि बहादुर पालले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर यु,रेनियम का,रोबार गर्ने ४ जनालाई सार्वजनिक गरेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयका डिएसपी नवराज भट्टराई नेतृत्वको टोलीले ब,रामद गरेको यु,रेनियमको कथा करिब २५ वर्ष पुरानो छ । रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–५ घर भएकी जानुका तामाङ बौद्ध बस्छिन् । ४० बर्षीया जानुकाको परिवारले बौद्धमा घर बनाएका छन् । उनका ससुरा अमर लामा भारतको खानीमा काम गर्थे ।​
जानुकाले ससुराले २५ वर्षअघि भारतबाट ल्याएर सो यु,रेनियम बौद्धस्थित घरमा राखेको प्रहरीलाई साविती बयान दिएकी छिन् । ‘करिब २५ बर्ष पहिले आफ्नो ससुराले भारतबाट यु,रेनियम ल्याएर राखेको जानुकाको भनाई छ’ महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एआईजी हरि बहादुर पालले रातोपाटीसँग भने, ‘हामिले जानुकालाई प,क्रेका छौं, थप अनुसन्धान गर्दै छौं ।’
अमर लामा उमेरले ८० पुगे । उनी अहिले अमेरिकास्थित छोरी कहाँ छन् । प्या,रालाइसिसको बिरामी भएको हुनाले उनलाई प्रहरीले सम्पर्क गर्न सकेको छैन । ६ वर्षदेखि अमेरिकामा रहेका अमरले थप कुरा नबताएसम्म यु,रेनियमको कथा अपुरो नै हुन्छ ।
जानुकाको विवाह भएको २० वर्ष भयो । बुहारी बनेर अमरको घरमा पाइला टेक्दा घरको एउटा कुनामा लुकाएर राखिएको न्यू,क्लियर इनर्जी यु,रेनियम उनले देखेकी थिइन् । तर, २५ वर्षसम्म त्यो वि,ष्फो,टक धातु घरकै कुनामा थियो ।
माइतीघर रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–५ का नारायणसिंह तामाङलाई उनले सो न्यू,क्लियर इनर्जी देखाइन् । फार्मेसीका विद्यार्थी ४० बर्षीय नारायण सिंहले जानुकालाई भने, ‘यो यु,रेनियम हो, अरब मुल्यमा बिक्री हुन्छ ।’
प्रहरीले चारै जनालाई प,क्राउ गरेको छ । यु,रेनियम बेच्न खोज्नेहरुलाई वि,ष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ऐन अनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंले उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यो सुराक फागुन १ मा प्रहरीलाई सुराक आयो, ‘काठमाडौंमा यु,रेनियम बेच्ने समूह सक्रिय छ ।’
यु,रेनियमको हल्ला त्यसअघि पनि बेला–बेला आइरहन्थ्यो । जानुकाको समूहले जसलाई बेच्न खोजेका थिए उनीहरु प्रहरीको सम्पर्कमा आए । फागुन १९ मा स्याम्पल मागेर परीक्षण गर्दा सो न्यु,क्लियर ईनर्जी प्रशोधन नगरिएको युरेनियम–२३८ रहेको खुल्यो । नास्टका वैज्ञानिकले सो ईनर्जीको परिक्षण गरेका हुन् ।
युरे,नियम सक्कली रहेको परीक्षणबाट देखिएपछि प्रहरीले सो सुराकलाई पछ्याइरह्यो । जानुकाको समूह र ग्राहकको बीचमा डेढ अरबमा किन्ने–बेच्ने डिल मिल्यो । इमोबाट पैसा देखाएपछि उनीहरु यु,रेनियम लिएर आए । ग्राहकसँगै प्रहरी पनि पुग्यो ।
अनि, जानुकाको समूह यु,रेनियम सहित प,क्राउ परे ।
Prevअभियान्ता केपी खनाल भन्छन्–‘४३ लाख दिएँ’, बालगृह भन्छ–‘हामीले ३८ लाख मात्रै पायौं’, बाँकी पैसा खोइ ?
Nextमेष राशिका लागि कस्तो छ २०७८ साल ? हेरौँ आगामी १२ महिनाको ग्रहफल
यस्तो छ तपाईको मंगलबारको भाग्य, चैत्र ३१ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्